के गर्मीमा कोरोना भाइरस टिक्दैन ? | Pennepal
Home हेडर के गर्मीमा कोरोना भाइरस टिक्दैन ?
एजेन्सीं । कोरोना भाइरसको पहिलो मामला गएको डिसेम्बरमा चीनको उहानमा देखिएको थियो । यसपछि विस्तारै विस्तारै यो विश्वको १ सय ६८ देशमा फैलिइ सकेको छ । यसलाई लिएर संसारभरीकै सरकार आफ्ना नागरिकलाई सजग गराइरहेको छन् र यसबाट बच्ने उपाय प्रचार–प्रसार गरिरहेका छन् ।
तर पनि यसलाई लिएर वजारमा अनेक हल्ला र अफवाह फैलिएका छन्, यसकारण मानिसका मनमा अनेक प्रकारका प्रश्न छन् । कतिपय स्थानमा गर्मीको सहयोगले कारोना भाइरस समाप्त हुने बताइएका छन् । यही दावीमा पानी तताएर खाँदा कोरानो भाइरस मर्छ भन्ने सल्लाह दिइएको छ । यहाँसम्म कि तातो पानीले नुहाउने सल्लाह दिइने गरिएको छ ।
विगत कयौं दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा यस्ता दावी प्रसस्त पाइन थालेका छन् । एउटा पोष्ट जसलाई कयौं देशमा हजारौंले शेयर गरेका छन्, त्यसमा दावी गरिएको छ कि तातो पानी खाने र सूर्यको प्रकाशमा बस्दा कोरोना भाइरस मार्न सकिन्छ । यो दावीमा आइस्क्रिम भने नखान सल्लाह दिइएको छ । यति मात्र होइन यो म्यासेजमा यो कुरा युनिसेफले भनेको भन्ने गलत हल्ला चलाइएको छ ।
यो दावीका वारेमा जानकारी लिन युनिसेफका लागि काम गर्ने चार्लेट गोर्निजसंग संपर्क गर्दा उनले यस्ता दावीलाई पूर्णतः अस्वीकार गरिन् । उनले भनिन् ‘हालै एउटा म्यासेज युनिसेफको नामले इन्टरनेटको दुनियाँमा फैलाइएको छ कि आइस्क्रिम वा चिसो कुराबाट टाढा रहँदा यो भाइरसबाट बच्न सकिन्छ, यो पुरै झूठो हल्ला हो ।’
जब कोरोना भाइरस संक्रमित मानिसले खोक्छ वा हाछ्युँ गर्छ तब त्यसबाट उछिट्टिने थुकका धेरै स–साना कण हावामा फैलन्छन् । यही स–साना कणबाट कोराना भाइरस फैलन्छ । व्यक्तिले एक पटक हाछ्युँ गर्दा ३ हजारभन्दा बढी कण शरीरबाट बाहिर निश्कन्छ । संक्रमित व्यक्तिको नजिक जाँदा यो कण हावामार्फत तपाईको शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छ । कहिले काँही यो कण तपाईको कपडा, ढोकाको ह्यान्डल र तपाईको सामानमा पर्न सक्छन् । त्यो ठाँउमा कसैको हात पर्यो र त्यो व्यक्तिले त्यही छोएको हात आफ्नो आँखा, नाक, मुखमा लग्यो भने त्यस्तालाई कारोना भाइरस हुन सक्छ ।
अमेरिकन नेशनल इन्सिच्युट आर हेल्थले आफ्नो अनुसन्धानमा यस्ता थुकका कणमा भाइरस ३÷४ घण्टा जीवित रहन सक्ने पत्ता लगाएको छ । केही पुराना अनुसन्धानले कोरोना भाइरस अनुकुल परिस्थितिहरूमा एक सातासम्म जीवित रहन सक्ने बताएको छ । कपडाजस्ता नरम चिजमा कोरोना धेरै लामो समय बाँच्न सक्दैन ।
यदी तपाई एक वा दुई दिनसम्म एउटै कपडा लगाउनु हुन्न भने भाइरस जीवित रहिरहन सक्दैन । यसको अर्थ हो, जसलाई कोरोना भएको छ उसले केही छाएको, हाछ्युँ गरेको वस्तु तपाईले छुनुभयो र त्यही हातले आफ्नो नाक, मुख, आँखा छुनु भयो भने तपाईको शरीरमा भाइरस संक्रमण हुन सक्छ । यो कुरामा ध्यान दिनुस् कि छुँदा मात्र होइन, तपाईको शरीरमा प्रवेश गर्दा यसको संक्रमण हुन्छ ।
कोरोना भाइरस ६०÷७० डिग्रीसम्मको तापक्रममा नष्ट हुदैन । त्यतिको तापक्रम नेपाल, भारत कही छैन र हाम्रो शरीर भित्र पनि । केही भाइरस तापक्रम बढेपछि नष्ट हुन्छन्, तर कोराना भाइरसमा तापक्रमले के असर गर्छ ? यस वारेमा बेलायती डाक्टर सारा जार्विस भन्छिन् – सन् २००२ को नोभेम्वर (कात्तिक–मंसिर) मा सार्स महामारी सुरु भएको थियो जुन नोभेम्बर (जेठ–असार) मा समाप्त भएको थियो । यो बढदो गर्मीका कारण भयो कि अन्य कारणले भन्न मुस्किल छ ।
भाइरसमा अनुसन्धान गरेका डाक्टर परेश देशपाण्डेकाअनुसार यदी कसैले धेरै गर्मीमा हाछ्युँ गर्यो भने थुकको छिटा सतहमा पर्दा छिट्टै सुक्न सक्छ र कोरोना फैलने क्रम घट्न सक्छ । मलाई थाहा छ, फ्लु भाइरस गर्मीको मौसममा शरीर बाहिर रहन सक्दैन, तर कोरोना भाइरसलाई गर्मीमा कस्तो असर पर्छ भन्न सकिन्न । यसैले गर्मीमा कोरोना भाइरस मर्छ भन्ने कुनै ठोस प्रमाण छैन, त्यसैले यसको भरमा नपर्नु राम्रो ।
कोरोना भाइरस विश्वको १ सय ६८ देशमा फैलिइ सकेको छ, जसमा ग्रिनल्याण्डजस्तो चिसो, दुबईजस्तो तातो, मुम्बईजस्तो ठिक्कको र दिल्लीजस्तो सुख्खा सहर पनि छन् । एक पटक यो मानव शरीरमा पस्यो भने यसलाई मार्ने तरिका वा उपाय अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन र कयौं देश उपायको खोजीमा लागेका छन्, तर पनि अहिलेसम्म यसलाई मार्ने औषधि बनाउन सकेका छैनन् ।
यही कारण सरकारले यसबाट बच्ने उपायका वारेमा आफ्ना नागरिकलाई बताउदैं आएका छन् । कसैले यातायात प्रतिवन्ध लगाएका छन्, कसैले एकअर्कासंग दूरी राखेर कुरा गर्न भनिरहेका छन् । यो भाइरसविरुद्ध हाम्रै शरीरले लड्नु पर्छ अर्थात हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालेनै यसलाई परास्त गर्नु पर्छ । हामी आफ्नो तन्ना धोएर ओछ्यानबाट यसलाई हटाउन सक्छौं तर, हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरिसकेको भाइरसलाई धोएर बाहिर निकाल्न सकिदैन । (बिबिसीबाट)
श्रीलंकामा तीनदिने कर्फ्यु, निर्वाचन स्थगित